Baarlamaanka Puntland oo maanta ansixiyey xubno ka tirsan xukuumadda iyo xeer ka hadlay sharciga darawalnimada. – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2012 12:09 g 0
Garowe, Nov 18 – Golaha wakiillada maamulka Puntland ayaa maanta ansixiyey xubno ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, kuwaasi oo ahaa xubno cusub oo ku soo baxay isku shaandhayntii golaha wasiirrada ee dhawaan m/weynuhu uu sameeyey.
Xubnahaan ka tirsan golaha wasiirrada Puntland ee maanta la siiyey codka kalsoonida ayaa tiro ahaan gaarayey 16 xubnood, waxaana lagu meelmariyey cod-aqlabiyad ah oo dhan 42 cod oo qayb ka ah 66 xubnood ee baarlamaanka Puntland uu ka kooban yahay.
Xubnahaan wasaaradeed ee la meelmariyey, ayaa iskugu jiray wasiirro, wasiirro ku-xigeenno iyo wasiiru-dawlayaal, kuwaasi oo intii aan la siin codka kalsoonida xildhibaannada ka hor jeediyey khudbado ay uga hadlayeen taariikhdooda nololeed iyo tamaha u qorshaysan in ay u maareeyaan mas’uuliyadaha loo dhiibay.
Dhinaca kale, golaha wakiillada Puntland ayaa maanta meelmariyey xeer-hoosaad ka hadlaya sharciga wadista gaadiidka, kaasoo xilli aan durugsanayn ay baarlamaanka u soo gudbisay wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka Puntland.
Xeerkaan, ayey xildhibaannadu dhawr maalmood ee ugu dambeeyey ka falanqoonayeen, iyagoo iskugu dambayntiina maanta ansixiyey, kaasoo hadda wixii ka dambeeya ka dhaqan-gali doona Puntland, laguna hagi doono hannaanka wadista gaadiidka.
Caawa iyo Daljir Axad, Nov 18_ Cabdifataax Cumar Geeddi_Nairobi Kenya